युगसम्बाद साप्ताहिक - यत्रो राष्ट्रघात, सबै चुपचाप
Friday, 02.21.2020, 11:43am (GMT+5.5) Home Contact
यत्रो राष्ट्रघात, सबै चुपचाप
Thursday, 04.25.2019, 02:25pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । आजभोलि तराईका जिल्लाहरुमा नागरिकता लिनेको भीड छ । अचम्मको कुरा त के भने नागरिकता लिन आउनेहरु सबै भारतीय छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा भारतीय मोटर र मोटरसाइकलले भरिभराउ छन् । सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार नागरिकता दिनु भन्ने आदेश दिएपछि देखिएको यस्तो दृश्यले हरेक नेपालीलाई झस्काएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सुरुमा गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि यसलाई चर्को राजनीतिकरण गरियो र मधेशीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न खोजेको भन्दै बिरोध भयो । अहिले मधेशीको नाममा विदेशीले नागरिकता लिइरहेको टुलुटुलु हेर्नुपरेको छ ।
नागरिकता कहिल्यै समाधान नहुने एउटा दीर्घरोगको रुपमा स्थापित भएको छ । पञ्चायतकालदेखि बहुदलकाल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि नागरिकताले विवादकै रुप लिइरहेको छ । कैयौंपटक ऐन संशोधन गरेर नागरिकता वितरण गरिदा तराईको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । वास्तविक भूमिपुत्रहरु नागरिकता विहीन नै बनिरहने तर विदेशीले नागरिकता पाइरहने परिस्थिति निरन्तर बनिरहेको छ ।
नागरिकता वितरणको प्रपञ्च पञ्चायतकालमै पनि रचिए । त्यो बेला भारतीय छापाहरूले नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरू रहेका र उनीहरूले नागरिकता नपाएको भनी गुनासो गर्दै प्रचारबाजी गरिरहेका थिए । त्यसको लगत्तैपछि पञ्चायतकालमा भारत निकट मानिने सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला घुम्ती टोली खटाएर तराईमा ३० लाख १२ हजारलाई नागरिकता उपलब्ध गराइयो । ०४६।०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई खुकुलो पारियो र धेरै गैरनागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए । २०६३ सालको आमूल परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले सयौं घुम्ती टोली खटाएर २६ लाखभन्दा बढीलाई नागरिकता दिइयो । त्यो बेला २२ लाख भारतीयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको खुला चर्चा हुनेगरेको थियो ।
भारतसंग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा नेपाल र भारत दुवैतर्फको नागरिकता लिनेहरू लाखौं छन् । भारतमा जारी निर्वाचनमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकताधारीहरुको मत नै निर्णायक हुने खबर भारतीय संचार माध्यमहरुले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यति मात्र हैन नेपाली नागरिकताधारीहरू विहारमा मतदान गर्न जान पाउनुपर्ने माग गर्दै सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूसंग हारगुहार गरिरहेका समाचार भारतीय अखबारहरूले नै सार्वजनिक गरे । यसैबाट पुष्टि हुन्छ कि नागरिकताको समस्या देखाएर नेपालमा भारतीयलाई भित्य्र्राउने प्रपञ्च भैरहेको छ ।
तराईमा भित्रिएका भारतीयहरूको स्वार्थकै लागि भारतले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै नागरिकतालाई जहिले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा दक्षिणबाट अनियन्त्रित प्रकारले भारतीयहरूको प्रवेश नै नेपालको नागरिकताको गम्भीर समस्या हो र नेपालको व्यापक राष्ट्रिय हितमा त्यसमाथि नियन्त्रणको आवश्यकता छ । तर यतिबेला गैरनेपालीलाई नेपाली बनाउने प्रयासहरूमाथि अंकुश लगाउनुको साटो त्यसमा उदार नीति बनिरहेको छ ।
नेपालमा विश्वका धेरै मुलुकका मानिस बसोबास गर्ने भए पनि यसमा सबैभन्दा बढी भारतीय नै छन् । त्यस्तै भारतमा पनि अन्य देशको तुलनामा नेपाली नै बढी बसोबास गर्छन् । यसको एउटा कारण भनेको धार्मिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध र खुला सीमाना हो । भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले केही समय अघि दिएको तथ्यांक अनुसार सन् १९८० मा नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरू थिए, जसमध्ये ८० को दशकमा करिब २३ लाखलाई नेपालको नागरिकता दिइएको थियो । नेपाल एशिया अध्ययन केन्द्रको अध्ययन अनुसार १९९१–२००० का बीचमा २० लाख भारतीयहरूले नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि पनि त्यो संख्या लगातार बढ्दै गएको छ । त्यसरी नेपालमा प्रवेश गर्ने भारतीयहरूले लगातार नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न जोड दिने गरेका छन् र ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिक बन्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि अनुकूल आधार तयार पार्न बारम्बार नेपालका संविधान वा कानूनमा परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । नेपालमा २०४७ को अन्तरिम संविधानले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर नागरिकता ऐन २०६३ ले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था ग¥यो, जसका कारणले लाखौं भारतीयहरू नेपालको नागरिक बन्न पुगे ।
पछिल्लो समय जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सर्वोच्चअदालतको आदेशपछि भारतीयहरु नागरिकता लिनेको भीड लागेको छ । दैनिक भारतबाट आएकाा सयौंले नागरिकता लिइरहेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन बाटो खुला गरेपछि सिमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकता लिनेको बढी भीड छ । यसरी नागरिकता लिन आउने अधिकांश व्यक्ति भारतीय नम्बरका गाडीमा आउने गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुुसार चैत १९ गतेदेखि त्यसप्रकारको नागरिकता वितरण शुुरू भएको हो । त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार चैत २६ गतेदेखि वैशाख ३ गतेसम्म नागरिकता वितरणको काम रोकिएको थियो । अदालतको निर्णयपछि वैशाख ४ गतेदेखि नागरिकता वितरणको काम फेरि शुरू भएको छ । नेपालीका नाममा भारतीयलाई नागरिकता वितरणको यो प्रपञ्चले नेपालमा नेपाली अल्पमतमा पार्ने गम्भीर षड्यन्त्र भरहेको छ ।
संविधान अनुसार नागरिकता ऐन बनेको छैन । तर छोटो बाटोबाट नागरिकता वितरण गर्ने काम भैरहेको छ । संसदमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । तर व्यापक बिरोधकाबीच त्यो पारित हुन सकेको छैन । नागरिकता विधेयक नै कसले बनायो भन्ने प्रश्न उठेको छ । कुनै आईएनजीओले विधेयक बनाएको आरोप कतिपयको छ ।
नेपालमा नागरिकताको नाममा हुने गरेको राजनीतिले कतै देश नै नरहने त हैन भन्ने चिन्ता जन्माएको छ । यी तथ्यहरु रहँदा रहँदै सरकारले किन त्यस्तै शैली अपनाएर नागरिकता दिन थाल्यो ? यो गम्भीर प्रश्न छ । संसदमा ऐन दर्ता भएको छ भने ऐनलाई कुनै केले रोक्यो ? नागरिकता वितरण सजिलो बनाउने शर्तमा सरकारलाई राजपाले समर्थन गरेको थियो । अहिले समर्थन फिर्ता लिएको छ । कतै दुई तिहाईको सरकार टिकाउन नागरिकता वितरण थालिएको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।